Xog-waraysi: 7 Isbeddellada Suuqgeynta iimaylka ee Soo baxaya 2022 | Martech Zone
In kasta oo tignoolajiyada iimaylka ayan yeelanin hal-abuur badan oo la xidhiidha nakhshadeynta iyo keenista, xeeladaha suuq-geynta iimaylka ayaa la kobcaya sida aan u soo jiidano dareenka macaamiishayada, u siino qiime, oo ku riixno inay nala ganacsadaan.
Isbeddellada Suuqgeynta Iimaylka ee Soo baxaya
Falanqaynta iyo xogta waxaa soo saaray Omnisend waxaana ka mid ah:
Waxyaalaha Isticmaaluhu Soo Saaray (UGC) - Iyadoo calaamaduhu ay jecel yihiin inay nadiifiyaan nuxurkooda, had iyo jeer kuma falceliyaan dhagaystayaashooda bartilmaameedka ah. Marka lagu daro markhaatiyada, faallooyinka, ama qoraalada warbaahinta bulshada ee la wadaago macaamiishaada waxay ku siinaysaa xaqiiqo heer sare ah.
Kala-qaybsanaanta iyo shakhsiyaynta - Dufcaddii hore iyo qaabkii qarxinta dirida wargeysyada ayaa xukumayay suuqgeynta iimaylka muddo tobanaan sano ah, laakiin macaamiishu waxay ku daaleen farriimaha aan si fudud ula socon. Gelida safarada iswada ee aadka loo shaqsiyeeyay lana kala qaybiyay ayaa hadda wada hawl gal aad u wanaagsan.
Isgaarsiinta Omnichannel – Sanduuqyadayada sanduuqa-sanduuqayagu waa ay ka buuxaan… sidaa darteed calaamaduhu waxay ku darayaan fariimo lagu bartilmaameedsado ogaysiisyada mobilada, fariimaha qoraalka ah, iyo xitaa meelaynta xayeysiiska firfircoon si ay ugu dhaqaajiyaan rajada socdaalkooda macaamiisha.
Xaqiiqda La Kordhiyey / Xaqiiqda Dhabta ah - Inta badan ka-qaybgalka iimaylka ayaa ku dhacaya aaladaha mobilada maalmahan. Taasi waxay siinaysaa fursad ay ku riixdo macaamiishu inay si aan kala go 'lahayn u gujiyaan tignoolajiyada mobilada ee horumarsan oo ay ku jirto xaqiiqada la kordhiyay (ARiyo xaqiiqada dhabta ahVR).
Isdhaxgalka - Waayo-aragnimada dhijitaalka ah waxaa qaata calaamado sababtoo ah waa dareere badan iyo waayo-aragnimo dabiici ah oo ka caawisa booqdayaasha inay is-hagaan oo shakhsiyeeyaan khibradooda isticmaale. Iimaylku waa bar bilawga dabiiciga ah ee waayo-aragnimadan, isagoo bilaabaya su'aasha ugu horreysa ee qabta jawaabta oo qaybisa tallaabada xigta ee waayo-aragnimada.
Kicinta Mobilada Magacyo aad u badan ayaa weli u naqshadeynaya iimaylka desktop-ka fursadaha maqan ee shaashadda yar iyo awoodda si fudud loo akhriyo oo loola falgalo emails. Qaadashada wakhti dheeraad ah si aad u geliso qaybaha mobile-kaliya ee iimaylkaga loo habeeyay aaladaha iimaylka mobilada ayaa muhiim u ah ka qayb qaadashada wadista.
Muhiimadda Qarsoonaanta Xogta - Apple waxay hoos u dhigtay macruufka 15 Mail App kaas oo soo afjaraya suuqgeynta iimaylka si ay u qabtaan munaasabad furan oo iimayl ah iyada oo loo marayo pixel tracking. Dabagalka buskudka ee sii dhamaanaya, suuqeeyayaashu waa inay adeegsadaan olole ka wanaagsan URL-yada si ay u caawiyaan macaamiisha iyaga oo aan ku xad-gudbin xeerarka ama walaacyada gaarka ah ee xad dhaafka ah.
Halkan waxaa ah macluumaadka buuxa ee ay naqshadeeyeen kooxda Cas ee Naqshadeynta Shabakadda Casaanka ah ee soo saaray xogtan cajiibka ah ee ku salaysan xogta Omnisend: 7 Isbeddellada Suuqgeynta E-mailka Dhammaan Milkiilayaasha Meheradaha & Suuqgeeyayaasha waa in ay ogaadaan 2022.
Shaacinta: Waxaan ku xirnahay Omnisend oo waxaan u adeegsanayaa xiriirinteyda ku xiran maqaalkan.
Tags: raadraaca emailka tufaaxaxaqiiqda la kordhiyaydhaqankaasturnaanta macluumaadkawaayo-aragnimada dhijitaalka ahemaildhacdo-wadaykala-qaybsanaantainteractivemacruufkamacruufka 15emaylka gacantahagaajinta mobiladaomnichannelomnisendshakhsi ahaaneednaqshadeynta websaydhka casemayl kiciyayMacmiilka la soo saarayxaqiiqada dalwaddii